Ahoana ny fomba hanatsarana ny pejy iray ho an'ny karoka eo an-toerana. Martech Zone
Alarobia, Oktobra 17, 2012 Alahady Oktobra 21, 2012 Douglas Karr
Ao anatin'ny andiany mitohy amin'ny fanatsarana ny tranonkalanao ho an'ny varotra miditra, tianay ny hanome famahana ny fomba hanatsara ny pejy iray hahitana azy. atiny eo an-toerana na ara-jeografika. Ny milina fikarohana toa an'i Google sy Bing dia manao asa be amin'ny fividianana pejy kendrena ara-jeografika, saingy misy zavatra azonao atao mba hiantohana ny pejy eo an-toerana ho voatanisa tsara ho an'ny faritra marina sy teny lakile na andian-teny mifandraika amin'izany.
Ny fikarohana eo an-toerana dia HUGE… miaraka amin'ny isan-jato lehibe amin'ny fikarohana rehetra tafiditra amin'ny teny lakile mifandraika amin'ny toerana misy ilay olona mitady. Orinasa maro no tsy mahita an'io fotoana io fanatsarana ny fikarohana ao an-toerana manome satria mahatsapa izy ireo fa tsy ny orinasan'izy ireo an-toerana… Nasionaly na iraisam-pirenena. Ny olana, mazava ho azy, dia na dia tsy mahita ny tenany ho eo an-toerana aza izy ireo dia mitady any an-toerana ireo mpanjifany ho avy.
Lohateny pejy - Hatreto, ny singa manan-danja indrindra amin'ny pejinao dia ny mari-pamantarana lohateny. Ianaro ny fomba manatsara ny tenifototrao ary hampitomboanao ny laharana sy ny tahan'ny click-through an'ireo bilaoginao ao amin'ny pejy valin'ny motera fikarohana (SERPs). Ampidiro ny lohahevitra sy ny toerana fa tazomy eo ambanin'ny tarehin-tsoratra 70. Aza hadino ny mampiditra famaritana meta mafonja ho an'ny pejy - tarehin-tsoratra 156 latsaka.
URL - Ny fananana tanàna, fanjakana na faritra ao amin'ny URL-nao dia manome ny motera fikarohana miaraka amin'ny toerana voafaritra izay momba ilay pejy. Izy io koa dia famantarana tsara ho an'ny mpampiasa motera fikarohana ary koa mandinika ireo fidirana pejy valin'ny motera fikarohana hafa.
LOHATENY - Ny lohateny namboarina tokony hanome lohanteny manan-danja amin'ny teny lakile miaraka amin'ny faritra jeografika afovoany izay ezahinao hatsaraina aloha, avy eo araho ny mombamomba anao. Aza hadino ny mampiditra famaritana meta mafonja ho an'ny pejy - litera 156 latsaka.
Serivisy SEO eo an-toerana | Indianapolis, Indiana
Fizarana ara-tsosialy - Ny famelana ny mpitsidika anao ho tonga hizara ny pejinao dia fitaovana lehibe hampiroboroboana azy ao anatin'ny vondrom-piarahamonina ilaina.
Map - Na dia tsy voadona aza ny sari-tany (afaka miaraka KML), ny fananana sari-tany ao amin'ny pejinao dia fomba iray tsara hanomezana traikefa ifandraisan'ny mpampiasa anao amin'ny toerana misy anao.
toro-lalana dia nanampy miampy ary azo ampiharina mora amin'ny Google Maps API. Hamarino tsara fa ny asanao dia voatanisa ao amin'ny lahatahiry orinasa Google+ ary Bing miaraka amina toerana jeografika marina voamarika ao amin'ny mombamomba anao.
Address - Aza hadino ny mampiditra ny adiresy mailakao manontolo amin'ny atin'ny pejy.
Images - Manampy sary miaraka amina mari-toerana eo an-toerana mba hahafantaran'ny olona fa mahafinaritra ilay toerana, ary ny manampy tag alt misy ny toerana ara-batana no tena ilaina. Manintona olona ny sary ary manintona ny fikarohana sary ihany koa… ny tag alt dia manampy amin'ny fampiasana ny teny geografika.
Fampahalalana momba ny jeografia - Ireo mari-trano, anaran-trano, làlana miampita, fiangonana, sekoly, mpiara-monina, trano fisakafoanana eo akaiky eo - ireo teny rehetra ireo dia teny manankarena izay azonao ampidirina ao amin'ny vatan'ilay pejy mba hanondroana anao sy hahitana ny toerana misy ny pejinao nohamarinina ho an'ny. Aza avela fotsiny amin'ny tenim-paritra iray monja. Betsaka ny olona mitady amin'ny fari-pahaizana isan-karazany.
Mobile - Imbetsaka ny mpitsidika no mitady anao, manandrana manao izany amin'ny fitaovana eo an-toerana ianao. Hamarino tsara fa manana fijery finday miasa amin'ny pejin'ny karoka eo an-toerana ianao mba hahafahan'ny mpitsidika mahita anao na mahazo lalana mankany aminao.
Ireto misy lahatsoratra mifandraika izay mety mahaliana:
Ahoana ny fanatsarana a Blog Post
Tags: bing afovoany orinasaGeofanatsarana ny jeografiaseo ara-jeografikagoogle toeranafanatsarana eo an-toeranafikarohana eo an-toeranaseo eo an-toeranatoeranasarintanysari-
Oct 18, 2012 amin'ny 1: 26 AM
Tena manampy anay ny hafatrao satria mikendry ny mpanjifa eo an-toerana izahay avy any amin'ny faritr'i Melbourne any Aostralia. Afaka mahazo hevitra hanatsarana ny tranokalako ho an'ny mpihaino eo an-toerana aho izao.
18 Okt 2012 amin'ny 6:10 PM
Noho izany dia mamariparitra famoronana pejy fidirana ho an'ny tranonkalanao ianao, misaraka amin'ny pejy fandraisana, izay nohamarinina ho an'ny fikarohana eo an-toerana? Heveriko fa tsy fahendrena ny mamorona maro amin'ireo pejy fitobiana ho an'ireo tanàna manodidina (manao marketing amin'ny Internet ho an'ny orinasa mitafo aho izay manompo tanàna manodidina 5).
Misaotra! Votoatiny mahafinaritra.
20 Okt 2012 amin'ny 2:09 PM
Misaotra @disqus_hIZRrUgZgM: disqus. Afaka mandeha an-dranomasina amin'ny pejy fitetezam-paritra nohavaozina ianao. Tsy azoko antoka fa hanana iray isaky ny andian-toerana tadiaviko hisarihana aho, fa hanana faritra lehibe. Ka amin'ny maha orinasa fiantohana nasionaly ahy dia mety manana pejy isaky ny faritry ny tanàn-dehibe tsirairay aho… fa tsy ny tanàna rehetra. Mila manana atiny ampy ianao isaky ny manavaka azy amin'ny manaraka. Amin'ny ohatra nasehonao dia mety manana pejy 5 samihafa aho - iray nohamarinina ho an'ny tanàna tsirairay.